Hoogganaan Biiroo Haqaa Oromiyaa, duguuggaan Sanyii magaalaa Moyyaaleetti raawwatame kan itti yaadamee raawwatameedha jedhe - NuuralHudaa
Hoogganaan Biiroo Haqaa Oromiyaa, duguuggaan Sanyii magaalaa Moyyaaleetti raawwatame kan itti yaadamee raawwatameedha jedhe
Last updated Mar 15, 2018 19
Sabtii darbe waraanni Makkalaakayaa godina Booranaa Magaalaa Mooyyalee keessatti Duguggaa sanyii raawwateen namoota 11 ajjeese, namoota heddu ammoo madeesse. Jiraattoonni aanaa Mooyyaaalee 50,000 oli qe’ee fi qabeenya Isaanii irraa buqqifamuun gara Keeniyaatti baqatan.
Sekreetariyaatiin Komaand postii yeroo Muddamaa immoo ajjeechaan raawwatame dogongoraan akka tahe fi namoonni ajjeechaa kana raawwatan 5 meeshaan waraana irraa hiikamuun qoratamaa jiru jechuun ibse.
Hoogganaan Komunikeeshiinii Biroo haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda’aa Gaafiif deebisaa Raadiyoo Jarman kan kutaa Afaan Amaaraa waliin godhe irratti
“ajjeechaan kun kan itti yaadamee raawwatame maalee kan dogongoratii miti, kana tahuu immoo namoota ajjeefaman jidduu akka jilbiifatu ajajamee kan rasaasaan rukutame jiraatu ragaan ni jira” jedhe .
Akkasumas qaamota ajjeechaa raawwatan qofa osoo hin taane qaamni ajaja kana baases to’annaa jala oluun adabamuu akka qabanii fi ibsi ajjeechaa raawwatame “dogoggoraan” jedhus ummata arrabsuu taha malee sababa sirriitii miti jedhe.